“Hain’Andriamanitra ny Zava-drehetra” | Natela Grigoriadis
TANTARANY Afaka nanampy an’ireo nanao pirinty miafina izy taoriana kelin’ny batisany, satria nanana traikefa teo amin’ny resaka varotra sady nahalala olona.
NY MPITARIKA ny Fianarana Ny Tilikambo Fiambenana ihany no nanana gazety, taloha kelin’ny 1990. Matetika ilay izy no nadika tanana. Niresahako àry ny anti-panahy iray atao hoe Genadi Gudadze fa tokony hanandrana hanao pirinty ny gazety ampiasainay izahay.
Fitaovana tsotsotra no nanaovan’ireo ranadahy pirinty, ary kely ihany ny zava-bitany. Raha te hanao pirinty gazety tsy tapaka ry zareo, dia nila fitaovana tsara kokoa, taratasy be dia be, milina fanoratana, ary olona nahay nampiasa azy io. Nila nampahafantarina tany amin’ny fanjakana daholo anefa ny fitaovana fanaovana pirinty, ary na ny taratasy aza. Nanara-maso an’ilay izy koa ny sampan-draharahan’ny fiarovam-panjakana.
Nomen’ny mpiara-miasa tamiko milina fanoratana aho. Nahita milina vitsivitsy tsy nilaina intsony mantsy izy sady efa tsy nanara-maso azy ireny intsony ny fanjakana. Nahay nanoratra tamin’ny milina ny zandriko vavy ka afaka nanampy anay. Nanamboatra fitaovana vaovao fanaovana pirinty ireo ranadahy, ary nahita toerana azo nividianana taratasy. Vonona ny zava-drehetra ka tsy ela dia nivoaka Ny Tilikambo Fiambenana voalohany tamin’ny teny géorgien.
Nisy olana hafa indray anefa. Nilaza tamiko i Genadi hoe tsy maintsy mitady toeran-kafa hividianana taratasy izahay. Nahita baoritra maromaro feno taratasy izy tao amin’ny biraom-panjakana iray, saingy tsy afaka nividy satria nisy polisy nanara-maso azy. Inona àry no hataonay? Hozy foana aho hoe: “Tsisy hevitra e!” Hentitra anefa i Genadi nilaza hoe: “Aza miteny an’izany fa ‘hain’Andriamanitra ny zava-drehetra.’”—Mat. 19:26.
Nankany amin’ilay birao aho ny ampitson’iny na dia natahotra aza. Nosaintsainiko foana ny tenin’i Genadi. Notarihin’i Jehovah ho eny amin’ny vehivavy iray mpitendry milina aho. Sariaka be izy ary vonona handefa ny fangatahako tany amin’ny tompon’andraikitra. Hay vadiny ilay izy! Tsy ela aho dia lasa mpividy taratasy tao amin’io birao io, ary tsy olana intsony ny resaka taratasy.